Daawo Sawiradii ugu dambeeyay ee laga soo qaaday Zoobe | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Daawo Sawiradii ugu dambeeyay ee laga soo qaaday Zoobe
Daawo Sawiradii ugu dambeeyay ee laga soo qaaday Zoobe
Waxaa dib u dhis lagu bilaabay dhismayaasha ku yaalla Isgoyska Zoobe gaar ahaan goobtii uu ka dhacay Qaraxa 14-kii bishan, kaasi oo lagu tilmaamay in uu ahaa mid Musiibo Qaran ah.
Dhismayaasha ayaa waxaa burbur xoogan uu ka soo gaaray Qaraxii Sabtidii ina dhaaftay ka dhacay isgoyska Zoobe, ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 280 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 300 oo qof.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo dhalinyaro is xilqaantay ayaa maanta oo Saddex berri laga joogo Qaraxii Zoobe waxa ay bilaabeen in ay dhismo ku meel gaar ah ku wareejiyaan goobaha ganacsi ee ku yaalla Zoobe, kuwaasi oo uu saameeyay Qaraxa.
Sidoo kale Maamulka gobolka, Dhalinyarada, Ciidamada Dowladda iyo xubno kale ayaa si isku mid ah uga qeyb qaadanaya dib u soo celinta bilicda wadada, kadib markii maanta ay bilaabeen olole nadaafadeed
Wadadan mudo Saddex maalmood ah ma aysan isticmaalin wax Gaadiid ah, oo ay wataan shacabka, marka laga reebo kuwa Ciidanka Dowladda Federaalka iyo Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM.
“Mida maanta aad arkeysaan oo runtii nadaafada socota oo la isku soo baxay iyo xaqiijinta Alxamdulilaah, dhalinyarada ayaa is abaabushay, anigana waxan diyaar u ahay inaan ka qeyb qaato.” Ayuu yiri Guddoomiye Thaabit.
Previous articleMas’uuliyiin ka tirsan dowlada Kenya oo Nairobi ku soo dhoweeyay dhaawacyo laga qaaday Muqdisho
Next articleEng: Yariisow: Dowladda Soomaaliya waxaa bixisay $1m oo doolar oo lagu taageerayo dhibanayaasha weerarkii Zoobe